တတ်နိုင် သလောက် ဒီကာလမှာ ခက်ခဲ နေပေမယ့် လည်းအိမ်မှာ ချက် ပြုတ်ကာ ကျွေးမွေး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စူးရှထက်…. – Shwe Naung
တတ်နိုင် သလောက် ဒီကာလမှာ ခက်ခဲ နေပေမယ့် လည်းအိမ်မှာ ချက် ပြုတ်ကာ ကျွေးမွေး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စူးရှထက်….
Model တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ စူးရှထက် ကတော့ အခုလို ပြည်သူ အားလုံး ခက်ခဲနေချိန်မှာ သူမ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဝင်ငွေမရှိတဲ့ ကာလဖြစ်ပေမယ့်လည်း ရှာဖွေစု ဆောင်းထားတဲ့ ချွေးနည်းစာ နဲ့ တတ်နိုင် သလောက် အလှူအတန်း တွေကို ပြုလုပ်ပေးနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရား တရားလည်း ကိုင်းရှိုင်းသလို မိဘကိုလည်း ကျွေးမွေး ပြုစုစောင့်ရှောက် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လှန် ရေးမှာလည်း ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူတစ်သားတည်း အခိုင်အမာ ရပ်တည် ခဲ့သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ရှိ ကာလမှာ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ ဆီကို သွား ရောက်ကာ စေတနာ အလှူရှင် များနဲ့ စုပေါင်းပြီးလိုက်လံ လှူဒါန်းနေ တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သူမရဲ့ wallပေါ်တွင်လည်း အလှူခံပို့စ် များကို ရှဲပေးကာ ကူညီကြဖို့ကို တိုက်တွန်း ပြောဆို ထားတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လောတုန်းကတော့ သူမ အစာအိမ် ရောဂါ ဖြစ်ပြီး နေမကောင်း ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက စိတ်ပူ ပေးနေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် အချိန်ကတော့ သူမ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ “ဒီနေ့အလှူ”ဆိုပြီး အိမ်မှာ ဟင်းတွေ ချက်ပြုတ်ကာ အားရပါးရ ကျွေးမွေး နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေ အတွက် မျှဝေပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ ကလည်း သူမရဲ့ အလှူအတန်း ရက်ရောတဲ့ စိတ်ထားကြောင့် ပိုပို ချစ်လာနေ ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ ကိုယ်နိုင် သလောက် လှူဒါန်းနေတဲ့ စူးရှထက် တစ်ယောက် အလှူရေ စက်လက်နှင့်မကွာ ဒီထက် လှူနိုင် ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။🙏
တမူ ထူးခြားတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ အသားကပ် ဝတ်စုံလေး ဝတ်ဆင်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်ကာ အထာကျကျ ပို့စ်ပေး ဓာတ်ဖမ်းနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
မိဘနှစ်ပါးကို သတိရကာ မျက်ရည်တွေကျပြီး စိတ်အားငယ်နေတဲ့ သူမရဲ့………….သဇင်ထူမြင့်
ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…..